တွေးမိတွေးရာ | Mg Ogga's Notes
ပိုက်ပိုက် မပေါတာ မှားလား
ဒီစာကို ကသာ အင်းတော် ဒိုင်ယာရီမှာ ထည့်ရေးမလို့ပဲ ဒါပေမယ့် သက်သက် ခေါင်းစဉ်ခွဲရေးချင်တာကြောင့် ခွဲရေးလိုက်ပါတယ်။ ကသာက မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီသွားတွေ နှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့တာ တစ်မြို့လုံးနီးပါးပဲ။ နောက် အရင်က အတော်ကို ခင်ဖူးတဲ့ အဒေါ်ကြီးတွေဆီသွား နှုတ်ဆက်တော့ သူတို့ က ကျနော် ဘာအလုပ်လုပ်နေလဲ လစာ ဘယ်လောက်ရလဲ NGO ဆိုတော့ ထောမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေ ကို လှိုင်လှိုင် မေးကြတယ်။ ကျနော်အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးတဲ့ မြန်းတဲ့ အခါမှာ လူတွေ အတော်များ စမေးကြတာ က လစာ ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာပဲမေးကြတယ်။ ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရလဲ။ ဘာတွေလုပ်ရလဲ။ ပျော်လား။ ဘာလို့ အလုပ်ကို လုပ်နေတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး အတော်ရှားပါတယ်။ အဲဒီအဒေါ်ကို…
July 4, 2013 in ခံစားမိသမျှ, အက်ဆေး စာတန်း, တွေးမိတွေးရာ.
လွန်လေပြီးသော နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ……………………….. ဘာရတ်(ခ)မဇ္ဈိမ(ခ) အခုခေါ်တော့ အိန္ဒိယဆိုတဲ့ ဒေသကြီးရဲ့ မြောက်ဘက်ပိုင်းက ဟိမ၀န္တာ တောင်တန်းတွေက မြစ်ဖျားခံပြီး လှပစွာတသွင်သွင် စီဆင်းနေတဲ့ ဝတီ ရောဟဏီ……။ သူရဲ့ တဘက်တချက်မှာ ကောလိယမြို့ပြနိုင်ငံရဲ့ နန်းစိုက်ရာ မြို့တော် ရာမဂါမ နောက်တဘက်မှာတော့ စကျ(သကျ)တို့ရဲ့ နေပြည် ကလိလဝတ်….။ ဒီမြို့ပြနိုင်ငံလေးနှစ် နိုင်ငံ ဘေးချင်းရှိနေပေမယ် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ပြဿနာမတက် အမျိုးသားရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးများကြောင့်ချက် ပြဿနာမရှိ။ နှစ်နိုင်ငံသားပေးသမီးယူပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်ကြ တယ်။ နှစ်ဘက်ထီးနန်းမျိုးဆက်များကလည်း ထိုခေတ်ဘာသာရေးဂိုဏ်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဝေဒအစဉ်လာတွေ ကို ပစ်ပယ်ပြီး သာမဏအကျင့်နဲ့ အလယ်လတ်လမ်းကို ဖော်ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ နဲ့လည်း ဆွေးမျိုးတော် စပ်ကြပြန်သေးတယ်။ နှစ်ပြည်ထောင်လုံး စိုက်ရေးပျိုးရေးအတွက်…
June 27, 2013 in ဘာသာရေးရာ, ဆောင်းပါး, တွေးမိတွေးရာ.
ညီကိုတို့ သဘောတူလျက် ပေါင်းဖော်ကြသည်မှာ………
မနေ့ ညက မုခစာအုပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လျက်နဲ့ ခရစ်စမတ်မှာ ပျော်တာရွှင်တာ ဘာညာဘာညာ လုပ်တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမပီသဘူး ဘာဘူး ညာဘူး ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ FB Status မှာ တွေ လိုက်ရတယ်။ တကယ်ထမ်းပြောရင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေမှာ မာရီခရစ်စမတ် ဆိုတာက ဘာသာရေး သဘောထက် ယဉ်ကျေးမူသဘောသတ်ရောက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ၁၉ရာစု နှောင်းပိုင်း လောက်ထဲက ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူအများဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေက ကမ္ဘာနေရာအတော်များကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမူ ဓလေ့တွေကို နှစ်ပေါင်းရာချီသွတ်သွင်းခဲ့လို့ ပါ။ဒါကြောင့် ဒီကိုလိုနီ လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမူထွန်းကားခဲ့တယ်။ ကိုလိုနီမဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေ တောင် ယဉ်ကျေးမူအရ သွတ်သွင်းခံရတာတွေရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အာရှနိုင်ငံအတော်အများလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လျက်…
ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ စနေမောင်မောင်၊ ရာဟုမောင်မောင်၊ ကာတွန်းမောင်မောင်တို့ စသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် မောင်မောင် များစွာရှိသည်။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြမည့် မောင်မောင်ကား ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် ဖြစ်လေသည်။ ဖေဘုတ်မောင်မောင် အင်တာနက် မသုံးခင်က နာမည်မှာ မောင်မောင် ပင်ဖြစ်သည်။သို့သော် အင်တာနက် စသုံးတတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ချက်မောင်မောင် ဂျီတော့မောင်မောင် စသဖြင့်ခေါ်ကြသည်။ အခုတော့ ချက်မောင်မောင် ဂျီတော့ မောင်မောင်မဟုတ်တော့ ပိုအဆင်မြင့်လာပြီး တော်လှန်ရေးသမားမျိုးချစ် ဖေဘုတ်မောင်မောင် ဖြစ်လာပြီ။ မောင်မောင်သည် ၁၀ တန်းကျကာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ လက်ယားလက်ယား ဖြစ်နေချိန် အကိုတစ်ဝမ်းကွဲ မောင်မောင် ပျက်စီးမည်စိုးသောကြောင့် သူဖွင့်ထားသော အင်တာနက်ဆိုင်တွင် ဆိုင်စောင့် ရန် တာဝန် ပေးသည်။ ဒီအချိန်မှစ၍ မောင်မောင် အင်တာနက်ကို စတင်သုံးတတ်လာလေသည်။ မောင်မောင်က ၁၀ တန်း မအောင်သော်လည်း…
June 27, 2013 in လူမှုရေးရာအဖြာဖြာ, ဟာသသရော်စာ, တွေးမိတွေးရာ.